carlo - Synonyms of carlo | Antonyms of carlo | Definition of carlo | Example of carlo | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for carlo
Top 30 analogous words or synonyms for carlo
ဘားမား ဗီဂျေ Grand Prix International Du Documentaire D´Auteur 2009, URTI, Monte-Carlo
အယ်လ် ဝယ်လိဒ်ဘင် တယ်လယ် သူအိမ်ယာခြံမြေလုပ်ငန်းများတွင် နယူးယောက်ရှိ Plaza Hotel နှင့် Four Seasons Hotel လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော ရှယ်ယာ အမြောက်အများပါဝင်သည်။ ၂၀၀၄ ဩဂုတ် နောက်ပိုင်းတွင် သူပိုင်ဆိုင်သည့် ရှယ်ယာများ၏ တဝက်ခန့်ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ သူသည် လန်ဒန် ရှိ Savoy Hotel နှင့် မိုနာကို ရှိ Monte Carlo Garden Hotel တို့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကော်လိုဒီ၊ ကားလိုး ကားလိုး လော်ရင်ဇီနီကို သူ၏ကလောင်နာမည်ဖြစ်သော ကားလိုး ကော်လိုဒီ (Carlo Collodi) အမည်ဖြင့် လူသိများသည်။ ၁၈၂၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၂၄၇က်နေ့ တွင် အီတလီနိုင်ငံ၊ ဖလော်ရင့်စ်မြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ အီတလီကလေးစာပေ စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ထင်ရှားသော ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်မှာ နတ်သမီး ပုံဝတ္တုရှည်ဖြစ်သော ပင်နော့ချီယို၏ စွန့်စားခန်းများ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
အာနက်စတို ဘာတာရယ်လီ သူ၏အောင်မြင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုသောအားဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဘာတယ်ရယ်လီ သည် ပြင်သစ်သမ္မတ Jacques Chirac မှပေးအပ်သော Chevalier de la Légion d'honneur ဘွဲ့နှင့် အီတလီသမ္မတ Carlo Azeglio Ciampi မှပေးအပ်သော Cavaliere di Gran Corce ဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ Société Nautique de Genève နှင့် ဘာတယ်ရယ်လီ တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ရရှိအောင်နိုင်ခဲ့ သော Alinghi ၏ ၃၃ ကြိမ်မြောက် America’s Cup ဆုသည် Golden Gate ရွက်လှေအဖွဲ့၏ တရားဝင်စိန်ခေါ်မှုများ ကို ဦးတည်လာစေသည်။
ဆယ်လ်ဗီယို ဘာလူစကိုနီ ၂၀၀၄ တွင် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ မှ “ဝန်ကြီးချူပ် Silvio ဘာလူစကိုနီ နဲ့ သူရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ မီဒီယာ အင်ပါယာကြီးရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွှမ်းမိုးမှုပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ အုပ်ချူပ်မှုတွေဟာ ဆက်လက်ပြီး ရှိနေတုန်းပါဘဲ။ အဲ့တော့ အမျိုးမျိုးသော သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှု အပေါ်မှာလည်း ခြိမ်းခြောက်နေတုန်းပါဘဲ” ဟု ဝေဖန်စာ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်လစ် အဖွဲ့အစည်းကြီး မှ Carlo Azeglio Ciampi ၂၀၀၃ တွင် ဗီတိုနှင့် ပယ်ချထားသော ဥပဒေအား အတည်ပြုပေးလိုက်ခြင်း ကိစ္စရပ်ကို ဦးတည်၍ ယင်းဝေဖန်စာကို ချိတ်ဆက်လာသည်။ ဝေဖန်သူများက အီတလီ တမျိုးသားလုံးအတိုင်းအတာ ၏ ၉၀% သောမီဒီယာ အား ဘာလူစကိုနီ မှ ထိန်းချူပ်ထားမှုကို ကာကွယ်ပေးသည် ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာ အေဒီ-၁၇၁၉ ခုနှစ် ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီး ဧကဒသမမြောက်ကလဲမင်းကနေ တရုတ်ပြည် ကန်တုံမြို့ကို Rev. Msgr. Carlo Ambrogio Mezzabarba ဦးဆောင်တဲ့ ဘာသာရေးသံတမန်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် ကပ္ပလီပင်လယ်ကို ဖြတ်ပြီး အပြန်ခရီး ဆက်ခဲ့ကြစဉ် မြန်မာပြည်ကို ဖြတ်သွားခိုက် ပဲခူးမြို့တော်နှင့် အင်းဝနေပြည်တော်တွင် ဘုရင်ဂျီဘာသာဝင်များရှိနေခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ကျော် ကြာပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များလည်း လိုအပ်နေကြောင်း သိရှိရသောကြောင့် သူတို့၏ အဖွဲ့ထဲမှ ဘာနာဘိုက် ဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းတော်ကြီး Sigismondo Maria Calchi ကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ ပထမဦးဆုံး မြန်မာပြည် ကက်သလစ် သာသနာ ဦးစီးမှူး တာဝန်ခံအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ (၁၇၂၈) ခုတွင် ဖါသာရ်ပီအိုဂါလီဇီးယား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေမင်းက သန်လျင်တွင် ဘာသာရေး သင်ကြားခွင့် ဟောပြောခွင့် ဘုရားကျောင်းဆောက်ခွင့်များ ပေးခဲ့သည်။ ၁၇၄၃ ခုတွင် မွန်ဘုရင် သမိန်ထောက ဖါသာရ် ဂါလီဇီယားအား ဘာသာရေး သင်ကြားခွင့် ဟောပြောခွင့်၊ ဘုရားကျောင်း ဆောက်ခွင့်များ ပေးသည်။ ပဲခူးတွင် သာသနာပြုများအတွက် နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ဘုရားကျောင်းဆောက်ရန် ဘုရင်က မြေနေရာ ပေးခဲ့သည်။
ဆယ်လ်ဗီယို ဘာလူစကိုနီ ပိုဆိုးသည်မှာ လက်ရှိ တရားသူကြီးများ၊ ရာဇဝတ်တရားသူကြီးများ အနေနှင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဆင်ပြေနေပြီးဖြစ်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည့် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေများကို ဘာလူစကိုနီ အစိုးရအဖွဲ့က ထိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအား ကန့်သတ်မည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို ရေရှည်အစီအစဉ် ဆွဲ၍ ပြုလုပ်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် ဝေဖန်ပြောဆိုသူများက ပြောသည်မှာ အုပ်ချူပ်ရေး အပိုင်းရဲ့ ထိန်းချူပ်မှုအောက်ကို တရားစီရင်ရေးကို ထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ရာဇဝတ်တရားသူကြီးများ ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်နိုင်ခြင်းကို ကန့်သတ်လိုက်တာပါဘဲ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရေးများကို အီတလီတရားသူကြီး များအားလုံးနီးပါး တညီတညွတ်တည်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသော်လည်း သုံးနှစ်ကြာ ငြင်းခုံမှုများ၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများ အပြီး ၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာတွင် အီတလီပါလီမန်မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် အီတလီ သမ်မတ Carlo Azeglio Ciampi က အတည်ပြုပြီးသည့် ဥပဒေများမှ အချို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည် ဟု ဆိုကာ ဗီတိုအာဏာ သုံး၍ ပယ်ချ ခဲ့သည်။